2009 – Family Of Films
Baabarr (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
Baabarr (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 5.2/10 Filmweb 8/10 Genre: Action, Crime, Drama Run Time:3hours Baabarr (2009) သည် IMDb 5.2 Filmweb 8/10 ရထားသော ဒါရိုက်တာ : Ashu Trikha က Ikram Akhtar (dialogue), Ikram Akhtar တို့ကဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Mithun Chakraborty, Om Puri, Sohum Shah တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Crime, Drama ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ရာဇဝတ်ကောင်တစ်ယောက်ရဲ့ မိသားစုက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ လူငယ်လေး ပိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဂန်းစတားအဖြစ် ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ ဘယ်လိုအက်ရှင်ခန်းကောင်းကောင်းတွေကြည့်ရမလဲ မှော်ဆရာ ကိုမြင့်သူနည်းပညာရဲ့ ရင်ဘတ်နဲ့ခံစားထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကို ခံစားကြည့်လိုက်ကြစို့လားဗျာ… Reviewed By Win Kyaw ...
The Pink Panther2(2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Pink Panther2(2009) မြန်မာစာတန်းထိုး စုံ​ထောက်​ကြီး ကလူးဆိုးဆိုတာနဲ့ ရှုတည်​တည်​ အခွီ​တွေ လုပ်​တဲ့ ​ခေါင်းဖြူဥာဏ်​ကြီးရှင်​ စုံ​ထောက်​ကြီးကို မျက်​စိထဲ​ပြေးမြင်​ကြမှာပါ 2006 ခုနှစ်​က ထွက်​ထားတဲ့ The Pink Panther (2006)ရဲ့ဒုတိယကား​လေးကို တင်​ဆက်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​. . . ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်း မ​ပြောပြ​တော့ပါဘူး တဝါးဝါး တဟားဟားနဲ့ သင့်​ကိုကလိထိုးမယ့်​ ကား​လေးဖြစ်​လို့ ပထမကားကို မကြည့်​ဖူး​သေးသူ​တွေ​ရော. . . ကြည့်​ဖူးသူ​တွေပါ 1+2 နှစ်​ကားလုံးကို တစ်​ခါတည်း တင်​ဆက်​​ပေးလိုက်​ပါပြီ အညွှန်းနှင့်​စာတည်းဖြတ်​သူ မြင့်​သူ(ငှက်​က​လေး-နည်းပညာ) Encoded By (သက်ပိုင်ဦး) 720p HD 300 MB (openload) 720p HD 800 MB (openload)
The Hangover (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး(၁၈+)
The Hangover (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး(၁၈+) Imdb Ratings: 7.7/10 Rotten Tomatoes 79% Google User : 88 % Genre: Comedy Run Time: 1 hour 40 mins The Hangover (2009) သည် IMDb 7.7 Rotten Tomatoes 79% Google User 88% ဒါရိုက်တာ Todd Phillips က ရိုက်ကူးထား၍ Jon Lucas, Scott Moore တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Zach Galifianakis, Bradley Cooper, Justin Bartha တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ဟာ Las Vegas မှာ လူပျိုအကြိုညကနေ နိုးထလာသောအခါ မနေ့ညက ...
The Lovely Bones (2009) မြန်​မာစာတန်းထိုး
The Lovely Bones (2009) မြန်​မာစာတန်းထိုး ဒီရုပ်ရှင်ဟာ အညွှန်းရေးပြဖို့ တကယ်ခက်ခဲတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ခုပါ ။ ကြည့်ချင်အောင် ရေးပြရရင် ကြည့်ချင်မှာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် သဘောရိုးလောက်ပဲ ပြောပြပါရစေ ... ရင်ထဲမှာ တကယ်ခံစားလာရရင် စာအဖြစ် ချရေးပြရမှာ ခက်သလိုပဲပေါ့ ...... ၁၉၇၃ ခု ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့မှာ ဆူဇီဆယ်လ်မန် ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး အိမ်ကနေ ပျောက်ဆုံးသွားတယ် ။ ဆူဇီပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ အတူ ဆူဇီအဖေဟာ အိမ်နီးနားချင်း ဂျော့ဟာဘီကို မသင်္ကာဖြစ်မိတယ် ။ ရဲတွေကရော လူသတ်သမားကို ဖော်ထုတ်နိုင်မှာလား ၊ ဆူဇီ အဖေကရော သူ့သမီး သေဆုံးသွားတာကို ဖော်ထုတ်နိုင်မှာလား ။ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ Mark Wahlberg နဲ့ Rachel Weisz သရုပ်ဆောင်ထားတယ် ဆိုပေမယ့် ဇာတ်လမ်းပုံစံက တစ်မျိုးပါပဲ ၊ ပုံမှန် သမာရိုးကျ ဇာတ်လမ်းကနေ ...
The Collector 2009 မြန်မာစာတန်းထိုး
The Collector 2009 မြန်မာစာတန်းထိုး ကြောက်မက်ဖွယ်ရာလူသတ်အက်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ချေ့စ်မိသားစုဟာဆိုရင် ဒက်ထရွိုက် မှာရှိတဲ့ အိမ်တစ်လုံးကို ပြောင်းရွှေ့ကျပါတယ်။ဒီလို ပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင် အာကင်ဆိုတဲ့ လူကို တံခါးပေါက် ပြတင်းပေါက်တွက် တပ်ဆင် ပေးဖို့အတွက်ငှားရမ်းလိုက်ပါတယ်။အာကင်ရဲ့ အမျိုးသမီးဟာဆိုရင် အကြွေးတွေ နစ်နေပြီး ငွေကို အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။အာကင် ရဲ့ လုပ်ခကလည်း အကြွေးပေးရအောင် မလုံလောက်ပြန်ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာ ကြံရာမရတဲ့အဆုံး အာကင်ဟာ ချေ့စ်မိသားစုရဲ့ မီးခံသေတ္တာကို ဖောက်ထွင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။အစီအစဉ်ချ လိုအပ်တဲ့ လက်နက်တွေယူပြီး အာကင်ဟာ ချေစ့်မိသားစုရဲ့ အိမ်ကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။အ်ိမ်ထဲကို ဖောက်ဝင် ပြီး လူရိပ်လူချည် မရှိတဲ့ အတွက် အာကင်တစ်ယောက် ဖောက်ထွင်းဖို့ ပြင်ဆင်နေတုန်း အိမ်အောက်ထပ်က အသံတစ်သံကိုကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီအတွက် သူက နီးစပ်ရာကို ၀င်ခိုအောင်းပြီး စောင့်ကြည့်ပါတယ်။ခြေသံရှင်က တစ်ခြားအခန်းထဲကို ၀င်သွားမှ သူလည်း အောက်ထပ်ကို ဆင်းလာခဲ့ ပါတယ် ထွက်ပြေးဖို့အတွက် တံခါးဝ အရောက်မှာသူတွေရတာက တံခါးတွေအကုန် သော့တွေ ခတ်ထားပါတယ် သူလည်း ထွက်ပြေးဖို့ စိတ်ကူးပြီး လောဘဇောနဲ့ မီးခံသေတ္တာကို ဖောက်နေတုန်း အော်သံတစ်ခုကို ကြား လိုက်ရပါတော့တယ်။သူတွေ့လိုက်ရတာကတော့ ...
Up (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
Up (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 8.3/10 Rotten Tomatoes 98% Google User : 84 % Genre: Animation, Adventure, Comedy Run Time: 1 hour 36 mins Up (2009) သည် IMDb 8.3 Rotten Tomatoes 98% Google User 84% ဒါရိုက်တာ Pete Docter, Bob Peterson တို့က ကုိုယ်တိုင်ရေးသားရိုက်ကူးထား၍ အသံ သရုပ်ဆောင် Edward Asner, Jordan Nagai, John Ratzenberger တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Animation, Adventure, Comedy ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… ခုနစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ် အဘိုးကြီး Carl Fredricksen သည် တီထွင်ထားတဲ့ မိုးပျံပူဖောင်းနဲ့အတူ Paradise ...
3 Idiots (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 8.4/10 Rotten Tomatoes : 100% Genre: Adventure, Comedy, Drama Run Time :2hours 50 minutes ဘွဲ့ရဖို့ ပညာသင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တကယ်တတ်ချင်လို့ ပညာသင်တာဆိုတဲ့အတွေးပေးလိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားလေး…ပညာကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ သုံးမလဲ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ သုံးတတ်ဖို့ စိတ်ကူးတွေပေးလိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားလေး ဒီကားလေးကို အားလုံးလည်း ကြည့်ဖူးကြမှာပါ ကျွန်တော်တော့ ကြိုက်လွန်းလို့ အကြိမ်ကြိမ်ကြည့်ပါတယ် ပညာရေးဆိုတာဘာလဲ ပညာသင်တာ ဘာကြောင့်လဲ စမ်းဆစ်မေးခွန်းထုတ်ထားတဲ့ကားလေမို့ အရမ်းကို ကြိုက်မိတဲ့ကားလေးပါ…3Idiots (2009) သည် IMDb 8.4 Rotten Tomatoes 100% Google User 92% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Rajkumar Hirani ရိုက်ကူးထား၍ Rajkumar Hirani နဲ့ Abhijat ...
All the Best: Fun Begins (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
All the Best: Fun Begins (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 6.1/10 Rotten Tomatoes : 51% Genre: Action, Comedy, Drama Run Time :2hours 24 mins တောင်းဆိုထားတဲ့ကား တင်လိုက်ပါပြီဗျာ…မအားလပ်တာရယ် တောင်းဆိုတာတွေများတာရယ် မီးပျက်တာရယ်ကြောင့် တော်တော်ကို ကြာသွားတာ တောင်းပန်ပါတယ် All the Best: Fun Begins (2009) ဇာတ်ကားသည် IMDb 6.1 Rotten Tomotoes 51% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Rohit Shetty ရိုက်ကူး၍ Robin Bhatt ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ Kumaar က သံစဉ်စာသားများထည့်သွင်းထားပြီး သရုပ်ဆောင် Sanjay Dutt, Ajay Devgn, Fardeen Khan တို့ အပီအပြင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, ...
Tidal Wave (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
Tidal Wave (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 5.7 Rotten Tomatoes 48 % Action, Comedy, Drama | 2h| Tidal Wave (2009) သည် IMDb 5.7 Rotten Tomatoes 48 % ရထားသော Action, Comedy, Drama ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်အားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ရေကြောင်းပညာရှင် ပါမောက္ခကင်သည် ဟွန်ဒေးမြို့ကို ဦးတည်လာနေသော ဆူနာမီအကြောင်းကို သတိထားမိလေသည် တောင်ကိုးရီးယားကျွန်းဆွယ်၏ အဓိကနေရာကို ဦးတည်လာနေသည်ကို သိရလေသောအခါ သက်ဆိုင်ရာကို သတိပေးဖို့ ကြိုးစား မသိသေးတော့ ခရီးသည်မျာကို အသိပေးဖို က ကြိုးစားလေသည်…သဘာဝအန္တရာယ်ကြောင့် ဘယ်လိုပျက်စီးမှုတွေကြုံရသလဲ လူတွေကိုကော ကယ်တင်နိုင်မလားဆိုသည်ကိုတော့ ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက်ခံစားပေးကြပါလို့…… Review by Win Kyaw Thu Translated by Khine Ni Ni Shein Encoded by Win ...
More Than Blue 2009 မြန်မာစာတန်းထိုး
More Than Blue 2009 မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 7.6 Rotten Tomatoes 93 % Drama Romance | 1h 45 min | ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အင်္ဂလိပ်နာမည်ကတော့ More Than Blue ဖြစ်ပြီး ကိုရီးယားနာမည်ကိုပြန်မယ်ဆိုရင် A story Sadder Than Sadnessပါ။ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတဲ့ အချစ်ကားပေါ။ အရမ်းနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ ဒီကားမှာ ကိုရီးယားနာမည်ကြီးမင်းသားဖြစ်တဲ့ Kwon Sang Woo(အချစ်လှေကားထစ်လေးမျာ)က အဓိကဇာတ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ထားပါတယ်။ မင်းသမီးကတော့ Lee Bo Youngပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ရေဒီယိုအစီအစဉ်ရဲ့ ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့Kက သူနဲ့အတူနေသူငယ်ချင်းCreamကို အရမ်းချစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Kက သူ့မှာကင်ဆာရောဂါရှိနေတဲ့အတွက် သူ့အချစ်တွေကို ဖွင့်မပြောခဲ့ပါဘူး။ ပြီးတော့ သူသေသွားတဲ့အခါမှာ မိဘဆွေမျိုးတွေမရှိတဲ့ Creamကို တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ရမှာ စိုးရိမ်တဲ့အတွက် Creamအတွက် လက်ထပ်ရမယ့်သူကို ရှာပေးခဲ့ပါတယ်။ Creamသဘောကျတဲ့ ...
Love Aaj Kal (မြန်မာစာတန်းထိုး)
ရိုမီယို၊ဂျူလီယက်.....ရှင်မွေးလွန်းနဲ့ မင်းနန်ဒါတို့လို ရင်မှာထိရှတဲ့အချစ်ဇာတ်ကားကောင်းကောင်းလေးတကားကို ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် IMBd 6.8/10ရထားတဲ့ တခါကြည့်ရုံနဲ့ တသက်လုံးအမှတ်ရနေမယ့် ဒီmုလားကားလေးကိုကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ QUALITY................. 1080HD DURATION............. 2:08:52 TRANSLTED BY..... KHIN NI NI SHEIN ENCODED BY........ Dr.Nyan Love Aaj Kal HD (1.5gb)
Bride Wars (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
သူများကိုဦးစားပေးတတ်တဲ့အမ်မာနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာရှေ့တန်းတင်တတ်တဲ့လဖ်တို့ နှစ်ယောက်ဟာ ကာလအချိန်ကြာကြီးထိ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေအဖြစ်ဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ထပ်ပွဲနဲ့ပတ်သတ်ပြီးလည်း ငယ်စဉ်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့အိပ်မက်လေးကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့စိတ်ကူးယဉ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့လက်ထပ်နိုင်တော့မယ်အချိန်လဲရောက်ရော သူတို့လိုချင်တဲ့ရက်ကိုအမှတ်မှားလိုက်မိတဲ့မင်္ဂလာပွဲစီစဉ်သူရဲ့အမှားကြောင့် အရမ်းချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကြား ပြသာနာအကြီးကြီးဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကိုယ်လိုချင်တဲ့ရက်မှာမင်္ဂလာဆောင်ရဖို့အတွက် တခြားသူရဲ့ပွဲပျက်အောင် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ဘယ်လိုကြိုးစားကြမလဲ။ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘ၀လက်တွဲဖော်လို့ယူဆခဲ့ရတဲ့ကိုယ့်ချစ်သူကရော နောက်ဆုံးအချိန်ထိကို ကိုယ့်အပြစ်အနာအဆာတွေအကုန်လုံးကို ချစ်ပေးနိုင်မယ့်သူဖြစ်ပါ့မလားဆိုတာရော၊သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့သံယောဇဉ်ကရော ဒီမင်္ဂလာပွဲကြောင့် ပြတ်တောက်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်သွားမလားဆိုတာ ပရိတ်သတ်ကြီးက စောင့်ကြည့်အဖြေရှာလိုက်ပါတော့။ Review and Translated by Su Nande Oo Encoded By Zin ko Htut Quality.............720p BRrip file size............660m